मेडिकल शहरको रुपमा विकास हुँदै गएको चितवनबाट आयो यस्तो डरलाग्दो खबर ! | suryakhabar.com
Home स्वास्थ्य मेडिकल शहरको रुपमा विकास हुँदै गएको चितवनबाट आयो यस्तो डरलाग्दो खबर !
मेडिकल शहरको रुपमा विकास हुँदै गएको चितवनबाट आयो यस्तो डरलाग्दो खबर !
on: ६ असार २०७५, बुधबार १६:०० In: स्वास्थ्यTags: No Comments
चितवन । देशका विकट जिल्लाहरुमा कम उमेरका किशोरीहरुले सन्तान जन्माउने गरेका समाचार प्रकाशित भइरहेका बेला मेडिकल शहरको रुपमा विकास हुँदै गएको चितवन जिल्लामै बालविवाह गर्ने र बच्चाले कम उमेरमा बच्चा पाउने सामान्य जस्तो देखिन्छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख विजयकुमार झा जिल्लाका पहाडी क्षेत्रका चेपाङ समुदायमा कम उमेरमा बच्चा जन्माउने क्रममा कमी नआएको बताउछन् । उनले भन्नुभयो–“२० वर्षको उमेरमा त आमा दुई÷तीनवटा बच्चा बोकेर परिवार नियोजनको स्थायी साधन भ्याक्सेटोमी र मिनील्याब गर्न आउँछन् ।” उनका अनुसार १२ वर्षदेखि विवाह गर्न थाल्ने र १३÷१४ वर्षमा पहिलो बच्चा जन्माउने प्रशस्त हुने उनले बताए ।
बहुसंख्यक चेपाङ समुदायको बस्ती रहेको कोराक हेल्थपोष्टका प्रमुख कुमार सापकोटाले प्रायः सबै किशोरीहरूले १५ वर्ष हुँदा विवाह गरिसक्ने बताए । १६÷१७ वर्ष उमेरका किशोरी परिवार नियोजनको अस्थायी साधन पाखुरामा राख्ने नरप्लान्ट र तीन महिने सुई डिपोप्रोभेरा लगाउन आउने उनले बताए । ४÷५ कक्षा पढ्दैमा विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने गरेको उनले बताए ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख गीता गुरुङ पहाडी क्षेत्रमा चेपाङसँगै अन्य जातिका किशोरीले पनि सानै उमेरमा विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने गरेको बताउछन् । उनले कम उमेरमा विवाह नगर्न र बच्चा नजन्माउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । वडा तहबाट यस्ता कार्यक्रम शुरु गरिए पनि रोकिन समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ पहाडी क्षेत्रमा कम उमेरमा बच्चा पाउने गरेको स्वीकार्दै यसको न्यूनीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम शुरु गरिएको बताउछन् ।
भरतपुर अस्पतालका प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा हेम सुवेदी कम उमेरमा बच्चा जन्मिदा आमा र बच्चाको मृत्यु दर बढ्ने, आमाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनसक्ने, उच्च रक्तचाप हुनसक्ने, कम उमेरमा बुढो देखिने, हड्डी खिइने, आमाको पाठेघरमा अंगुरको झुत्तो जस्तो मासु देखिने र पछि त्यसबाट क्यान्सर हुनसक्ने, बच्चा जन्माउन गाह्रो हुने, दूध नपुगेर बच्चालाई कुपोषण हुने, सानै उमेरमा बच्चा हुँदा आमालाई मानसिक दबाब बढ्नेजस्ता समस्या आउने बताउछन् ।
सप्तकोशीमा ट्रक खस्दा दुईको ज्यान गयो
६ असार २०७५, बुधबार १६:००